Asus က ZenFone6ရောက်လာမည့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုသည် Androidsis
Zenfone6သည်ကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားသောလူသတ်သမားအသစ်ဖြစ်လာစေသည်။ ယခင်ဖုန်းပေါက်ကြားမှုတွင်သူ၌ရှေ့ကင်မရာများထက်နှစ်ဆမြင့်သော notchless display နှင့် motorized နောက်ဘက်ကင်မရာများရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
မနေ့က Asus သည်၎င်း၏ Twitter အကောင့်မှတစ်ဆင့်ဖုန်း၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့သည် တပ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုဘက်ထရီစွမ်းရည်.
Zenfone6သည် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီရှိသည်ဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးတိုင်ဝမ်မှထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်ကယင်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ASUS ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကတကယ်တော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဘက်ထရီတစ်ခုပါလိမ့်မယ် ယခုနှစ်တွင် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီဖြင့်ဒုတိယအထင်ကရဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ပထမကတော့ Nubia နီကို Magic 3တစ် ဦး နှင့်အတူကြေညာခဲ့သည်ရာ Snapdragon 855 နှင့်အခြား high-performance ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ။
5000> 1 +7+ 3700, ဒီတော့ဘာကြောင့်ရိုးရိုးလေးရွေးတာလဲ #DefyOrdinary? #ZenFone6 pic.twitter.com/x8R24953mS
- ASUS (@ASUS) မေလ 14, 2019
Asus ကဘက်ထရီစွမ်းအားကိုအတည်ပြုရုံတင်မကဘဲ၊ သူလည်းရယ်စရာဖန်ဆင်းတော်မူ၏ OnePlus7တစ်ချိန်တည်းမှာ။ ၎င်းတွင် Zenfone 3,700 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်6mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။7Pro ကို OnePlus ၎င်းသည်၎င်း၏စံမော်ဒယ်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသော်လည်း၎င်းသည်နောက်ကွယ်တွင်ကျန်နေသည်။
Asus သည် OnePlus7ကို၎င်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်အတူကျိန်းသေယူသည် ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်အချို့ဒေသများတွင်အနိုင်ရပြီးဖြစ်သည်။ Zenfone6သည်မျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပိုမိုမြင့်မားပြီး OnePlus ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော 'notchless' နှင့် 'holeless' ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတွင် audio jack၊ သီးသန့် microSD ကဒ်အထိုင် (triple card tray) နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောဘက်ထရီတို့ပါရှိသည်။ ၎င်းမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ASUS ကစျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်အနိုင်ရလိုသည်။
ဒီပစ္စည်းဟာနာရီပိုင်းအတွင်းမှာစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီပွဲကိုအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုနိုင်အောင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်မည်။ အဲဒီမှာဒီထင်ရှားတဲ့တခြားအရည်အသွေးတွေကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Asus က ZenFone6ရောက်ရှိလာမည့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုအတည်ပြုသည်
Pokémon Rumble Rush သည်onစတြေးလျတွင်ရပြီးသော Android ကိုရောက်လာလိမ့်မည်